Geofumadas: Saadaalinta 2010: Barnaamijka GIS - Geofumadas
Disember, 2009 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google Earth / Maps, GvSIG, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, egeomates My, qgis, uDig
Dhowr maalmood ka hor, kuleylka qaxwaha walaashey wuxuu udhaqaaqaa hooyada waan sameynay mala-awaal ku saabsan isbeddellada loo dejiyay 2010 aagga Internetka. Marka laga hadlayo jawiga deegaanka, xaaladdu waa mid deggan (ma aha in la yidhaahdo caajis), waxyaabo badan oo tan ayaa horay loogu sheegay xilliga dhexdhexaadinta ee ugu weyn ee magaca waawayn, laakiin maaha in la nadiifiyo koobkii kafeega ee saacaddan iyo bilowga sanadka dhammaadkiisa, halkan waa ay socotaa.
Software-ka ganacsiga (bilaash maaha): Warar yar. Meelaynta udhaxeysa ESRI, Bentley iyo AutoDesk uma muuqdaan kuwo isbedela, (ugu yaraan degaanka Hispanic) iyo marka la eego naqshadaynta waxay ku dhowdahay shan sano tan iyo markii ay soo baxday xml iyo isdhexgalka heerka heerarka OGC ayaa joojiyay in la yaab leh.
Sidoo kale, iyada oo aan loo eegin inta la sheeganayo, hagaajinta awoodda waxqabadka vector ee GIS iyo daawashada CAD-da waa mowduucyo aad u dheer.
Sidaas, marka laga hadlayo AutoDesk, inta badan waxaan arki doonaa AutoCAD 2011, oo dadku horeba u isticmaali jireen cajaladaha xuduudaha (Ribbon) wuxuuna bilaabaa madadaalo sida qiimaha leh munaasabadaasi ku timid. Waa macquul in Civil 3D uu na siin doono waxyaabo layaab leh, laakiin aan badnayn, biseylka barnaamijka iyo isu dheelitir la'aanta dadka isticmaala jahwareerka leh waxyaabo badan oo waalan ayaa sii jiraya. Sidoo kale sida aan ognahay, AutoDesk ma sameyso war xad dhaaf ah sanadaha aan caadiga ahayn (sii deynta, ma aha jadwal), kaliya qurxiyo, tani waxay nagu adkaynaysaa sida aan u aragno qaab cusub .dwg ee 2011 markii uu ku dhawaaqay AutoCAD 2012.
Haddii ay dhacdo Bentley Waxaan arki doonaa waxyaabo badan oo waalan, laakiin kaliya heerka sigaarka cabista xad dhaafka ah. I-model Waqtigan xaadirka ah, waxay kaliya saameyn ku yeelan doontaa Mashruuca Wise iyo Publisher, sidoo kale heerka soo jeedinta, maxaa yeelay feker ahaanteyda Bentley waxay dooneysaa inay ka soo ceshato qiimaheeda lagu daray Xulista iyo faafinta XFM, oo ay qorsheyneyso muddada dhexe ee aynaan arki doonin 2010. Malaha sanadkaan aan eegno fulinti ugu horeysay ee Bentley Hotels ka qaybqaadashada Dhiibo, Haa, waa in la cabaa si aad u sarreeya, oo aan haysto sadax siyaabood oo aan jeclahay inaan sheego.
Sida ESRI, ma haysto fikirka ugu yar ee aan filan karno, Qaybta 9.4?, Waan ka shakisanahay. Qalabyada heerkaas meelaynta ah (xagga iibka iyo budhcad-badeednimada) way adag tahay in la dareemo inaad wax badan bislaan karto, in kasta oo saaxiibbada xaafad furan ku hay derbiga Macondo.
Sida for GIS kala cayncayn ah Waxay noqon laheyd mid dagaal badan, laga yaabee intaan la gaarin bisha Juun inaan aragno Manifold 9. In yar oo aan ku aqrinay dardaarankii sixir ee Dimitry sii daayay, waxaan u arkaa inaan ku adkeysanayo CUDA oo dadka ku qasbaya inay xakameyaan 64, taas oo ah waxa ay wacayaan xawaaraha. Ceeb, sababtoo ah waqti hore waa inay heshiisyo la galaan kuwa waaweyn, ugu yaraan qaababka dwg iyo dgn ee ku haray heer tuugsi oo lagu caddeeyo qallafsanaantooda ka dhexeysa dhabta iyo dhadhanka xun.
Haddii wax laga filayo Manifold waa in asxaabtani sigaarka cabbaan ee cagaaran, La yaabi meyno haddii ay ku kordhiyaan waxqabadyo badan oo waalli ah toy-ka, taas oo si tartiib tartiib ah u hagaajineysa booskeeda marka loo eego kuwa waaweyn. Laakiin fekerkeyga, waxaan arki doonaa waali badan heerka keydka xogta iyo isdhexgalka, in yar oo ka mid ah heerka dhismaha iyo tafatirka vector.
Isha furan: Raadinta waaritaan. Qofna ma oran tani maahan ganacsi, shuruudaha bilaash iyo bilaash la'aan waxay ku filan yihiin in ay kala soocaan qaybaha.
Qodobbo aad u fiican, laakiin feker ahaanteyda, gvSIG oo ay la wadaagto 1.9 deggan sii wadi doonaa xallinta cayayaanka yaryar iyo abuurida xulafooyin bixiya joogtaynta iyo meeleynta Ereygan wuxuu umuuqdaa mid dhib badan, hadaan makarafoonka siino aqoonyahanada cilmiga bulshada, waxaan sifiican ujecelahay sida cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga cilmiga beeraha wax ay ku sifeeyaan
Dhirta qaarkood ma aha kayn, sababtoo ah waa inay jirtaa jawi wanaagsan oo qadar ah oo loo tixgeliyo in la tixgeliyo.
Haddii ay dhacdo GvSIGWaa inay raacdaa xulafadaas ay ka bilowday Yurub, gudaha Spain iyo Latin America. Sababta aasaasiga ah: kuwaas oo ku siin doona sii wadista wicitaanada waalan sida Windows 7 haddii ay tahay Generalitat Ma xiiseynayo inuu sii wado Don Bill Gates, ama kunka dhadhan ee ku jira keydka Linux. Tan awgeed, waxaad u baahan tahay inaad abuurto iskuxirno waara isku xirka isku xirnaanta: tacliinta, waaxda gaarka loo leeyahay, waaxda dawliga ah, taas oo diyaar u noqon karta markaan wax ka aragno gvSIG 2.0.
Xaaladda doorka ay ka ciyaaraan dadaallada sida OSGeo, berdaha y Fur furida GIS-da, waxaa la filayaa in ay sii wadi doonaan dabaqa dhulka, iyada oo ay ka sii weyn tahay bulshada Hispanic iyo isku dheelitirka u dhexeeya bilaash iyo bilaash la'aan.
Kuwa kale maaha lacag la'aan, waxaa laga yaabaa inaan haysano version cusub GIS la qaadi karo, kaas oo cusbooneysiiya astaamaha xasilloon oo isku dhafan lamaanayaal dhowr ah. Fikradayda, waxaan arki doonaa wax yar oo cusub oo kuwa kale ah oo horey u gaadhay qaan gaar, sida GIS Quantum, Grass iyo Udig; Waxay leeyihiin cadaadis badan oo lagu dhiso sii jiritaan waaya-aragnimadooda.
Anigu meesha kama saarayo wararka xiisaha leh, waxa dhaca ayaa ah in sida dadaalada yar yar (aan bilaash ahayn), awooddooda sawaxanka ay ku leeyihiin saameyn yar deegaanka Hispanic. Uguyaraan, maahan sida gvSIG, kaas oo ciddi kasta oo yar ka soo qaad jolota si aad u duulisid, istaraatiijiyad ka shaqaysay in badan oo ah nidaam ahaan marka loo eego xajmiga xajmiga; oo dhidibada sii wata.
Haddii aan dibadda u baxo, waxaan sii deyn lahaa qaar ka mid ah doorbidka aan u leeyahay Software maaha lacag la'aan, maxaa dhacaya waa in gvSIG ay tahay inay ka fekeraan dadka isticmaala naasaha, (95%) oo leh xayeysiis 90,000 ah oo la xariirta jawiga Java iyo in siyaasadaha kala duwan ay ka hortagaan inay u guuraan Linux romplón.
Sidoo kale wax badan oo ka mid ah ilo furan waxay noqon doontaa wareega waxa ku dhacaya MySQL, hadda taas Oracle wuxuu leeyahay sigaarka qumman ee u dhexeeya faraha labaad iyo kan saddexaad (iyo sadexaad). Qayb ahaan wanaagsan, maxaa yeelay qaar badani waxay filayaan war waali ah oo ka soo baxa PostgreSQL iyo PostGIS.
Dhir kale: Lo aan la saadaalin Karin Google Earth, fekerkeyga muddo seddex sano ah ayaa lahaan kara karti badan oo loogu talagalay dhismaha iyo falanqaynta jiido kml iyo adeegyada OGC. Waxay u badan tahay in xaqiiqda ah ku xir halkan ilaa naqshad sida caadiga ah u-heshiisiinta abuuro miraha horumarinta qaybaha sadexaad, tani waxay Google ku adkeyneysaa in la siiyo qiimaha uu u qalmo (iyaga), nashqad navigation gorilopolic. (Qalabka ugu dambeeya waxaa la fahamsan yahay macnaha guud ee UTM 15 iyo 16 oo lagu daray saameynta ay leedahay kafeega gabadhan
Maxaa kale oo aan dhihi karaa, tani waa xaafadaha alaabooyinka hareeraha yaala. Cadcorp, MapInfo iyo SuperGIS waxay ka yimaadeen xaafad kale, tanina waxay ku haysaa boostada miyopia ee beerta deegaanka.
Post Previous" Hore Bentley Cadasatre: kala duwanaanshaha Bentley Map iyo Power Map
Post Next Geofumed: 48 khadad madow iyo caddaan ahNext »